Ady amin’ny fiparitahan’ny viriosy Manana ny lanjany ny fitsaboana amin’ny zava-maniry
Mbola tena ao anatin’ny ady hatao amin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina COVID 19 isika ankehitriny.
Tsy mbola tena fantatra mazava hatreto izay fanafody tena mahasitrana tanteraka io karazana viriosy iray ity ary mbola eo am-panaovana fikarohana avokoa ny rehetra. Nampahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fitsaboana amin’ny alalan’ny zava-maniry hiatrehana izao valan’aretina izao tetsy amin’ny CFM Ampefiloha omaly ny filoha tale jeneralin’ny vondrona JCR ny profesora Ratsimivony Jean Claude . Nambarany tamin’izany fa maro ny ezaka efa nataon’izy ireo, indrindra taorian’ny antso nataon’ny Filoham-pirenena ho an’ireo manam-pahaizana Malagasy vonona hamondrona ny heriny amin’ity ady hatao amin’ny coronavirus ity. Anisan’ny efa nanaovan’izy ireo fikarohana sy nahitan’ny mpiray tanindrazana tombontsoa ohatra ny fampiasana ireo karazam-bokatra efa hananan’izy ireo sy nanaovany fikarohana toy ny baoma fosa…. Nentiny sy nitondrany fanazavana teo anivon’ity andrim-panjakana iray ity izany omaly noho ireo mpikambana maro aminy mivezivezy mamita asa manerana ny Nosy. Fahombiazana ny fihaonan’ireo tompon’andraikitra roa tonta tamin’ny ankapobeny.